Thola ukuthi ungalihlobisa kanjani ikhaya lakho ngesitayela se-vintage boho | Bezzia
Ungayihlobisa kanjani ngesitayela se-vintage boho
USusana Garcia | 26/04/2021 20:00 | Umhlobiso, Amathrendi wokuhlobisa
La ukuxuba kwezitayela lapho uhlobisa Ingenye yezinto ezinhle kakhulu esingayenza, ngoba isinika inkululeko ethe xaxa uma kukhulunywa ngokuthola izingcezu nogqozi. Kuyiqiniso futhi ukuthi izitayela kwesinye isikhathi ziyahlangana futhi kunzima ukuyiqonda enye ngaphandle kwenye. Isibonelo, isitayela sokuvuna sikhona kakhulu kwezinye ezifana nezimboni noma i-boho chic. Kulokhu sizobona ukuthi singahlobisa kanjani ngesitayela se-vintage boho.
El Isitayela se-vintage boho sisebenzisa ubuhle nokuthamba kwesitayela se-bohemian kanye nokuthinta okukhethekile kwezingcezu zokuvuna ezinomlando nohlamvu. Ngaphandle kokungabaza, kungenye yezingxube esizithanda kakhulu ngoba singakha izindawo ezinobuntu obuningi nesitayela esingenakuqhathaniswa.
1 Imibala emhlabeni we-boho
2 Izitshalo zibalulekile
3 Ukuthinta okungajwayelekile
4 Izingcezu zokuvuna
5 Ungatatazeli ukuhlobisa
Imibala emhlabeni we-boho
Mhlawumbe into enzima kakhulu ukuxuba nokuhlanganisa isitayela sokuhlobisa se-boho yimibala, ngoba ayikho ingxube nje kuphela. Ngesitayela seNordic kusetshenziswa amathoni amaningi ayisisekelo futhi ngalomqondo kulula, kepha emhlabeni we-boho ukubukeka okungajwayelekile kuyadingeka ngamathoni ajwayele ukufudumala. Bangakwazi hlanganisa amathoni womhlaba, amanye abomvu, ansundu, amawolintshi futhi luhlaza okwesibhakabhaka noma oluhlaza okotshani. Konke kuncike enombolweni yemibala esifuna ukuyengeza. Njengoba kunenkululeko enkulu, singasebenzisa amathoni ahlukahlukene kakhulu futhi sijabule ngawo. Vele, kufanele sikubalekele ukweqisa, ngoba uma sinombala omningi kakhulu singagcina sikhathele. Sebenzisa ithoni eyisisekelo efana ne-beige namathoni amhlophe aphukile futhi ngaphezu kwabo engeza izindwangu ezinamaprints nemibala emihle.
Izitshalo zingeza kakhulu kunoma yikuphi ukuhlobisa nasekhaya, kepha ngesitayela se-vintage boho cishe zihlala zikhona. Ungasebenzisa izimbiza ezahlukahlukene, ezinye zinesitayela sokuvuna, njenge-terra cotta, ukuxuba izitayela. Izitshalo ezinkulu noma i-cacti zilungile. Ungafaka futhi ezinye izitshalo ngezimbiza ze-crochet, eziphinde zaba yimfashini futhi zilungele ukuxuba lezi zitayela. Ungakha ikhona eligcwele izitshalo.
Ku-boho chic sinokuthinta okungajwayelekile kepha futhi kubuye kube okukhombisa indlela yokuphila yama-bohemian. Kungakho ezikhathini eziningi singabona izingcezu ezivela kwamanye amasiko ngale ndlela. Uma futhi ukhetha okuthile kokuvuna uzoba nokuthinta okuhle. Ungesabi ukuxuba bese ukhetha izingcezu ozithandayo, noma zingeyona inkambiso, ngoba lona umoya walesi sitayela.
Kunemibono eminingi ehlukene ngesitayela sokuvuna, kepha ngaphezu kwakho konke, izingcezu eziyiqiniso nezasendulo ziyafunwa, ezingatholwanga kabusha noma ezingeyona nje ikhophi yento endala. Kulokhu ungasesha ngemikhondo, ngoba kuzo ungathola izingcezu ezithakazelisa ngempela, ezinomlando wazo nobuntu. Ukukhetha izingcezu ezikhethekile kuyinto yakudala ngesitayela se-boho, ngoba awufuni ukuba nendlu efana neyabo bonke abanye abantu, ngokuya ngamathrendi, kepha into eyingqayizivele nehlukile.
Ku isitayela se-vintage boho izingcezu kufanele zikhetheke, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ngeke sikuthole konke ngasikhathi sinye. Kubalulekile ukuthatha isikhathi ukukhetha izingcezu nemininingwane, ubheke izinto esizithandayo ukudala isimo esihle ekhaya lethu. Lapho usunayo ifenisha eyisisekelo, ungathatha isikhathi sakho ukubheka imininingwane emincane, kusuka kumavazi kuya ezindwangu kuya ezibukweni. Akukho kushesha uma kukhulunywa ngokuthola izingcezu zokuvuna ngoba lokho esikufunayo akuveli njalo ekuqaleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Ungayihlobisa kanjani ngesitayela se-vintage boho
Kungenzeka yini ukugcina ubuhlobo obunobungane ne-ex yakho?
Ukuhlanganiswa kombala okugqamile kule ntwasahlobo